मुसे धान (निबन्ध) – युवराज नयाँघरे -Brtnepal.com
घरमा मुसा लागेर किताब काटेर हैरान पारेको छ । अझ निन्द्रा बिगार्नमा मुसाले जति दिक्क अरु कसले लाउँछ र ?
धेरैजसो त दशैं सकिए लगत्तै धान काटिन्थ्यो । कहिलेकाँही हो– दशैंमा नै धान काटी नयाँ धानको चिउरा कुट्ने ।
दशैं सकिए लगत्तै धान काट्ने चटारो भइहाल्थ्यो ।
मधेशका पारिला दिनमा कति पटक त धान खुर्रिएर गइसक्थ्यो । तैपनि पिङमा मच्चिने र चाडबाडको अलमलले छेका हालिरहन्थ्यो ।
मंसिरपछि खेतमा मुसाले हुलेका धान टिप्न म जान्थेँ । मुसालाई दोहोलो काढ्नु पनि त पथ्र्यो । त्यै भएर बा–आमाले खेतका मुसा खेद्ने कुरामा नाइनास्ति गर्नु भएन । भन्नुहुन्थ्यो– ‘घरको भकारी नि रित्याउने, खेतकै पनि बुत्याउने ।’
गाउँका धेरै भुराहरुको स–सानो झुन्ड थियो– मुसे धान खन्ने । तिनको तन, मन हमेशा मुसे धानमै अडिएको थियो । तिनले यै कमाइबाट आफ्ना धेरै रहरहरु पूरा गर्ने लक्ष्य लिन्थे ।
यति धेरै इच्छा, यति धेरै रहरका दबाबमा परेका हुनाले – मंसिरसम्म धान काटेका गरा कुर्न गाह्रो पथ्र्यो । त्यै भएर कति चोटि त धान काट्नुअघि नै म मुसे धान खन्न पस्थेँ– लहलह धान खेतमा ।
मंसिरपछि गाउँका खमार र खेतमा बढ्थ्यो चहलपहल । पर्म लाउने र खेताला खोज्नेको दोहारीलत्तो हुन्छ गाउँमा । हतार–हतार धान नकाटे कहिलेकाँही त रहलपहल मनसुनले असिना बर्साउँथ्यो । अनि त धानका बाला त बाटामै सोत्र्याम्मै ।
‘शनिबार छुट्टीमा जाऊ न !’
सर्वमान्य तर्क र कुरोले विजय पाउँथ्यो । अरु पाखा लाग्थे । मिल्नेहरुका बोलीमा उर्दी हुन्थ्यो– ‘फरुवा बोक्नु । कोदालो नि ल्याउनु !’
स्कुलका लागि किताब, कपी वा झोलामा डटिएर अघिपछिभन्दा एकघन्टा अघि हिँडिन्थ्यो । अघिल्लो दिनको साँझ वा शनिबारकै कुनै समयको तारतम्य मिलाई साथीहरुले फरुवा लगिसकेका हुन्थे । कतिले धानबारीमा लुकाइसकेका हुन्थे बोरा, धोक्रा, बाँसका डाली ।
म पनि स्कुल जाने बाटो मोडेर पैनीको डिलैडिल गएँ । तीन चार दिन अघिको सल्लाहले गरेका बुँदामा टेकिएर साथीहरु आएका थिए । ती प्राण जाला वचन खेर नजाला– भन्ने सिद्धान्तमा अडिग थिए ।
अनि फरुवा, चले । आली छेउका उरुङखात बुरबुरे माटो उठाइएका ठाउँमा । मुसाले घर बनाउँदा भित्रबाट बाहिर थुपाथ्र्यो बुनियाँका डल्ला फस्रो माटो । हामीलाई पनि मुसाको दुलो चिन्न यतिखेर ठूलो सहयोग हुन पुग्थ्यो ।
अनि मुसाले कति मिहिनेतले बनाएको प्वाल रैँदालो पार्न थाल्थ्यौँ हामी । कुनै निर्माण छरेर वा कुनै ठूलै योजनाले चाँडो साथृकता पाउने शुभ मुहूर्त हो यो । यस्तै विश्वासमा म मुसे धानका निम्ति पसिना खर्चिरहेको हुन्थेँ ।
एकपटक हो– झन्डै एक बोरा जस्तो धानका सग्ला–सग्ला बाला थन्काएको भेटें मैले मुसाको दरबारमा । तह–तह बनाइएको दुलोमा धानका राम्रा–राम्रा बाला एउटा दानासम्म नखाई राखिएको थियो ।
‘मुसाले मंसिरमा पाँचवटीसम्म स्वास्नी भित्र्याउँछ । अनि धानका बाला बोकाउन ती रुपसीलाई खटाउँछ । जब पुसको जाडो बढ्छ– त्यसपछि सबैलाई खेदेर एकलै धान खान थाल्छ ।’
धानको उक गेडो पनि देख्न पाइएन । बरु धानका पातले तह–तह खापेर न्यानो बिछौना बनाइएको छ । त्यसमा आँखासम्म नउघ्रिएका राता बच्चाहरु गुडुल्किएका हुन्थे ।
धान त कहाँ हो कहाँ ? दुःख मात्र दिएको आक्षेप मुसाले पाउँथे । हुन पनि एक घन्टामा मुसे धान भेटिने–नभेटिने संकेत पाइन्थ्यो । एक अर्थमा यो परीषा हुन्थ्यो । हाम्रो धैर्य र खटनको जाँच ।
मुसाले रित्ता पारेका दुलो त्यतिखेर फटाफट हेरे पनि अर्को दिन धीत मर्ने गरी म त्यहीँनिर नि आएको थेँ कति चोटि । यो मेरो एक्लो भाव, एकान्तपन र एकाग्र रुपको अंकमाल हुनुपर्छ ।
मुसे धान नभए पनि मुसाले पारेका प्वालमा पुसे शित वा कुइरोले एक खालको चिसो ओराल्छ । त्यो शीतले माटोमा नपत्याउँदो कलाकारिता समाउँछ । मलाई त्यो कलात्मकले तान्छ, तानिरहन्छ ।
मुसे धान खन्दा यसको धेरै साक्षी भेट्न सकिन्छ । कति प्वालहरुमा बाँगो टिङ्गो तरीकाबाट बाला लगिएको हुन्छ । कतिपय दुलामा मुसाले सिधै लगे पनि गहिरा खण्डमा धानका बाला बडो मिलाएर राखेको देखें ।
अरुका किताब, कपडा, अन्न खाँदा फोहोर पारे पनि मुसाले आफ्ना दुलामा सफा–सुग्घर र जतनसँग धान थन्काएको देखिन्थ्यो । शायद आफ्नो श्रमको मूल्यलाई ऊ कदर गरिरहेको थियो ।
मुसे दरबार निहालेर बसेको साथीहरु सुझाव दिइरहेका हुन्थे । कोदालो चलाउनेहरुले तिनका कुरामा कति मन दिएका हुन्थे थाहा छैन– तर तिनका मुन्टो हल्लाइ र फरुवा उचलाइमा समानता भेटिन्थ्यो ।
हुन त मुसाले गहुँ, आलस, तोरी, जुट वा मकै पनि आफ्नो दुलामो लैजाँदो हो । तर म र अरु दौंतरीका निम्ति धानको सिलोबालोमा मन जोडियो हेक वर्ष । यो अपराजित खुशी जस्तै, यो अत्यावश्यक प्राप्ति जस्तै, यो अविच्छिन्न हर्ष जस्तै ।
मुसे धानले गर्दा कक्षा छुटेको बहाना भएन । कोदालो चलेको कुराले नै महत्व पायो । गुरु पाठ वा ज्ञान मेरा लागि थोरै अर्थ हुन सके– मुसे दरबार रुङिरहँदाखेरि । अभ्यास, पढाइ वा सोधपुछले यतिखेर स्थान पाएनन्– फरुवाका झम्टाइमा ।
कतै धान, कतै पात, कतै घाम छिर्ने प्रकाशको व्यवस्था । भोजन, आराम वा योजनाको संयोजन । मुसासँग मैले सिक्ने कुरा हो – अरु कै भए पनि व्यवस्थित प्रयोगबाट जीवन बनाऊ सम्पन्न र सुखद । नदेखाऊ तर मोज गर निष्कपट । मुसा र देश आज धेरै नानीहरुले बनाउने प्रिय वाक्य हो ।
म मुसे धानका लागि खेत जान छोडेको छैन । मंसिर, पुस मेरा लागि झन्–झन् आवश्यक महिना भए । दुला, प्वाल वा बुरबुरे माटोले ढिस्को उठेका ठाउँतिर गइरहेछु म ।
Published on July 20, 2017 at 5:41 am